चिकित्सकको अनुभव : सामाजिक दुरी र डर घट्यो , संक्रमणको जोखिम बढ्यो – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/चिकित्सकको अनुभव : सामाजिक दुरी र डर घट्यो , संक्रमणको जोखिम बढ्यो
चिकित्सकको अनुभव : सामाजिक दुरी र डर घट्यो , संक्रमणको जोखिम बढ्यो
पछिला दिनहरुमा किस्ता किस्तामा लकडाउन खुकुलो बन्दै गइरहेको छ । भारतका विभिन्न स्थानमा नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाईहरु रोजगारीका लागि गएका छन् । उनीहरु मध्ये केही स्वदेश फिर्ता आएसँगै क्वारेन्टिनमा बस्नेको संख्या बढेको छ । क्वारेन्टिन अव्यवस्थित छ ।
पीसीआर परीक्षणमा चाप अत्यधिक छ । पछिल्ला दिनमा दुवैतिरका सुरक्षा निकायको आँखा छलेर नेपाली र भारतीय नागरिक छिर्न सुरु गरेको सुनेको छु । जनमानसमा त्रास घट्दै गएको छ । लापरबाही बढ्दै गएको छ । यसले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ ।
चैतमा कोरोना भाइरसको त्रास बढी थियो । पहिलोपटक पर्सामा स्वाब संकलन गर्न जाने जिम्मेवारी मेरो काँधमा आयो । टेकुमा लिएको तालिममा कहिंकतै भूलचुक हुन्छ कि भन्ने डरले मलाई नै सताएको थियो । स्वाब संकलन तथा त्यसको व्यवस्थापनका लागि टेकु अस्पताल काठमाण्डौंमा वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालबाट मैले तालिम लिएको थिएँ । एक्लैले २ सयको हाराहारीमा स्वाब संकलन गरेपछि बल्ल साथीहरु सघाउन तयार भए । यसले त्यसबखत स्वास्थ्यकर्मीमा समेत डर रहेको प्रष्ट पार्छ ।
कोरोना संक्रमितको संख्या बढन थालेसँगै अस्पतालमा आएका शंकास्पद मात्रै होइन, छिमेकी जिल्लाको शंकास्पद व्यक्तिको स्वाब संकलनमा हाम्रो टिमलाई सफलता मिल्यो । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा आएका सबैको स्वाब हामी जोखिम मोलेरै संकलन गरेर ल्याउँथ्यौं । अहिले पर्सामा स्वाब संकलनको लागि नारायणी अस्पतालमा मात्र ६ वटा टोली तयार पार्न सफल भएका छौ ।
हरेक टोलीमा जनस्वास्थ्यले पठाएका ३ जना र महानगरपालिकाबाट १ जना स्वास्थ्यकर्मी खटिन्छन् । अर्कोतिर, जिल्ला जनस्वास्थ्य र महानगरपालिकाको सहयोगमा दुई पटक एक दिने अभिमुखीकरण तालिम दिएका छौं । जसबाट स्वस्थ्यकर्मीलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्रीको उचित प्रयोग कसरी गर्ने ? स्वाब संकलन, भण्डारण अनि स्थानान्तरणबारे जानेका छन् । तालिममा सहभागी स्वास्थ्यकर्मी गाउँपालिकादेखि स्वाबको नमूना संकलन गरेर नारायणीको पीसीआर प्रयोगशालामा पठाउँछन् । छोटो समयमा आफ्नै सक्रियता र सहभागितामा दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुँदै गएको देख्दा गर्व लाग्छ ।
चैतको अन्तिम साता तीनजना भारतीय जमातीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि पर्सामा लगातार संक्रमण देखिन सुरु भयो । वीरगञ्ज कोरोनाको ‘हट स्पट’ कै रुपमा परिचित भयो । तर, हामी कत्ति पनि विचलित भएनौं । आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछाडि हटेनौं ।
सरकारले ०७६ चैत ३० गते नारायणी अस्पताललाई कोरोना लेभल २ अस्पतालको रुपमा घोषणा गरेको थियो । भर्ना भएका सबै संक्रमितलाई उपचारपछि डिस्चार्ज गरेर नारायाणी जनरलमा गईसकेको छ । अहिले नारायणी अस्पताल अन्र्तगत अस्थायी गण्डक कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा छ । सुरुका दिनमा नारायणीको मात्रै भर थियो । त्यतिबेला त्यो किसिमको डर पनि थियो । अब हरेक निजी तथा सरकारी अस्पतालले केही प्रतिशत आइसोलेसन वार्ड बनाउनुको विकल्प छैन । महामारीका लागि चरणवद्ध तयारीमा जाँदै सबै मिलेर प्रतिकार गर्ने हो ।
चैतमा सरकारले नारायणीमै पीसीआर मेसिन पठाउने र कोरोनाको परीक्षण गर्नु भनेर निर्देशन आयो । मेसिन त आइपुग्यो, तर अस्पतालमा मलेकुलर ल्याब थिएन । मेसिन सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सहयोगी सामग्री थिएनन् ।
वैशाख २० गतेसम्म परीक्षण सुरु हुन सकेन । आवश्यक सामाग्रीको व्यवस्थापन छिटो गर्नुपर्छ भन्ने विचारमा अस्पतालका मेसु डा.मदन उपाध्याय पनि सहमत हुनुहुन्थ्यो । सोहीअनुसारको प्रयास भयो । मलेकुलर ल्याब बनाउनुको साथै आवश्यक सबैखाले सहयोगी सामग्री आयो । म प्याथोलोजिस्ट डाक्टर । ती सबै कामको नेतृत्व मैले गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । मेसु सरले राय माग्दा ‘हुन्छ सर गर्न सकिन्छ’ भन्दै प्रतिवद्धता जनाउँदै गएँ ।
सुरुका दिनमा हामीले परीक्षण गरे पनि नतिजाको भेरिफिकेसन गर्न टेकु अस्पताल पठाउनुपथ्र्यो । वैशाख २४ गतेदेखि टेकु प्रयोगशालाको भ्यालिडेसन पत्र प्राप्त भयो । त्यसपछि पीसीआर रिपोर्टको नतिजा दिन नारायणी पीसीआर ल्याब सक्षम बनेको हो । हामीले ८ हजारभन्दा बढी स्वाब संकलन गरिसकेको छ भने ४ हजार भन्दा बढी पीसीआर परीक्षण गरी नजिता दिएका छौं ।
अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको स्वास्थ्य सुरक्षा एकदमै महत्वपूर्ण छ । घर परिवार नभनी स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा सञ्चारकर्मी खटिएका छन् । पर्सामा मात्रै ९ जना स्वास्थ्यकर्मी, २ जना पत्रकार संक्रमित भए ।
म आफैं रातिको १२ बजे पनि स्वाब संकलनका लागि निस्किएको छु । महामारीे विरुद्धको लडाईमा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि रहनुपर्छ । समुदायका सेवामा खटिएका युद्ध मोर्चाका अग्रपंक्तिका यी सिपाही संक्रमित हुनु पक्कै राम्रो संकेत होइन । त्यसैले हामी ‘फ्रन्टलाईनर’ अझै सतर्क र व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षाका सामाग्रीहरु प्रयोगमा गम्भिर हुनैपर्छ । स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीबाट संक्रमण फैलियो भने झनै विकराल स्थिति आउन सक्छ । त्यसो नहोस् भन्नका लागि सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ ।
आइसोलेसनमा बस्नेहरुलाई कोरोना भाइरस, कोभिड–१९ रोग र संक्रमितले अपनाउनुपर्ने सावधानीका बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ । अर्कोतर्फ, उनीहरुमा मानसिक तनाव हुन्छ । मनोचिकित्सकबाट निरन्तर परामर्श दिनुपर्छ । मानसिक तनावबाट मुक्ति दिन योग, ध्यानहरु, शारीरिक व्यायामहरु सिकाउनुपर्छ । आइसोलेसन भएर बस्नु भनेको आफ्ना परिवारजन र समाजबाट टाढा रहनु मात्र होइन, उनीहरुलाई संक्रमण हुनबाट जोगाउनु पनि हो भनेर बुझाउनुपर्छ ।
कोभिड बाहेक अन्य रोगका बिरामीका संख्या पनि दिनहुँ बढिरहेको छ । कोभिडकै त्रासका बीच त्यस्ता बिरामीहरुको रोगको निदान एवं उपचार चुनौतीपूर्ण पक्कै छ । तर, गर्न नसक्ने भन्ने होइन । अब सम्बन्धित समस्याका जानकार चिकित्सकले नै उनीहरुको स्वास्थ्य समस्या समाधानका अग्रसर गर्नुपर्छ । शंकास्पद लागे स्वाब संकलन गरेर पीसीआर परीक्षणका लागि पठाउने, रिपोर्ट नआउँदासम्म विरामीलाई आईसोलेटेड गर्ने, आफू पनि अरुको सम्पर्कमा नआउनेगरि बस्ने । हेड इन्जुरी, ट्रमाको सिरियस विरामीलाई कोभिड अस्पतालमा हैन, जहाँ उनीहरुको उपचार हुन्छ त्यहि आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
बाटो बाटोमा सुत्केरी मरिरहेका छन्, टोल टोलमा आत्महत्याका घटना भईरहेका छन् । कोभिडले भन्दा अरु कुराले मानिस बढी मरिरहेका छन् । यो त सरोकारवाला निकायको लापरबाही हो । यसमा कसले ध्यान दिने ? उनीहरु जिम्मेवार हुनु पर्दैन र ?
अस्पतालको स्तरमा वृद्धि हुँदा प्रयोगशालाको स्तरोन्नति हुनु अपरिहार्य हुन्छ । सीमित मात्रामा भएका भीटिएम, रिएजेन्ट र जनशक्तिसँग धेरै अपेक्षा राखेर के गर्ने ? अझ उनीहरुलाई व्यक्तिगत आग्रह, दबावमा नपारी सरकारको निर्देशिका अनुरुप काम गर्न दिनु आजको आवश्यकता हो ।
अन्त्यमा, चैत्रमा जोखिम कम थियो, कोरोनाको डर बढी थियो । अहिले त्यो डर कम छ तर जोखिम बढी देखिएको छ । अहिलेसम्म स्थिति नियन्त्रणमै भएको देखिन्छ ।
काबुभन्दा बाहिर गए महाविपद नआउला भन्न सकिन्न । यसतर्फ आम नागरिक, उद्योगी व्यापारी, पत्रकार, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय, सुरक्षा निकाय लगायत सबै सचेत हुनु जरुरी छ ।
कोरोना भाइरसको औषधि वा खोप उपलब्ध छैन । अझै लामो समयसम्म यो महामारी रहिरहन पनि सक्छ । अब सुरक्षाका उपाय अपनाएर कोरोना भाइरससँगै जिउन सिक्नुपछृ । आ–आफ्नो स्तरबाट महामारी बिरुद्ध एकजूट हुनुपर्छ ।
सकारात्मक सोच विचार र सकेको सहयोग गर्न चुक्नुहुदैन । सरोकारवाला पक्षबीच निरन्तर समन्वय हुन सकेमात्र हामीले सफलता पाउने हो । तिनै तहका सरकारले जनस्वास्थ्य विज्ञसँगको परामर्शमा योजना बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसले मात्रै कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँमा सफलताको बाटो बनाउँछ ।